💕အမှတ်တမဲ့မှ အမှတ်တရသို့💕 – Tourde Myanmar
အသက် (၃၆) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မက်ဟန်မာကယ်လ် ( Meghan Markle) ဟာ သူမ အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ်မှာ အင်္ဂလန်ကို အလည်အပတ်လာရင်း ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်နောက်ခံ အမှတ်တရနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ နောက် (၂၁) နှစ် အကြာမှာတော့ ဒီနန်းတော်ကြီးရဲ့ တော်ဝင်မိသားစုဝင် အဖြစ်နဲ့ မင်းသားဟယ်ရီလက်ကိုတွဲလို့ မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အမှတ်တမဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတစ်ပုံဟာ ဘယ်လောက်များ အမှတ်တရတွေဆီကို သယ်သွားနိုင်လဲဆိုတာ သက်သေပါပဲ။
ကိုယ့်မှာရော ဒီလိုဖြစ်ဖို့ ကံမပါဘူးလို့ ဘယ်သူကြိုသိနိုင်မလဲနော်? ဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုတွေ မဖြစ်ချင်ဦးတောင်မှ အင်္ဂလန်ဆိုတာ သြဇာအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ့ငွေကြေးအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ University of Oxford နဲ့ University of Cambridge အစရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့နိုင်ငံ၊ တစ်ချိန်တစ်ခါက ကမ္ဘာကြီးကို အရှေ့အနောက် ဖြန့်ကျက်လို့ တစ်ဖက်မှာနေဝင်ရင်တောင် တစ်ဖက်မှာနေထွက်လို့ နေမဝင်အင်ပါယာလို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံ၊ ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးကိုတော့ ဒီဘဝမှာ တစ်ခါတစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားကြည့်သင့်တယ်လို့ မထင်မိဘူးလား။
ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာဒေသတွေကို အလည်သွားရင်း၊ ကိုယ်မသိနိုင်တဲ့ အနာဂတ်မှာ ထူးခြားအံ့သြစရာ အကြောင်းတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်လာမို့ တိုးဒီမြန်မာနဲ့ အတူ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကို ခရီးသွားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ….
အင်္ဂလန်-စကော့တလန်- ဝေးလ် ခရီးစဉ်
11-20 Oct 2019 USD – 3690 ( ၉ ညအိပ်/ ၁၀ ရက်) Emirates Airline
သွားရောက်လည်ပတ်မဲ့ နေရာတွေက တော့
စကော့တလန်ပြည်နယ်ရဲ့ သမိုင်းဝင် အီဒင်ဘရာရဲတိုက် “Edinburgh Castle”
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ “Old Trafford” ဘောလုံးကွင်း
မန်ချက်စတာ မြို့ ရဲ့ အကြီးဆုံးဈေးဝယ်စင်တာကြီး “Trafford Mall”
“Stonehenge” လို့ခေါ်တဲ့ စက်ဝိုင်းပုံ ကျောက်တုံးကျောက်ဆိုင်ကြီးတွေ
ဝေလပြည်နယ် အတွင်း Cardiff Bay ရှိ “Wales Millennium Center” [ကဇာတ်ရုံ]
သမိုင်းဝင် အထင်ကရ အဆောက်အဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ “Cradiff Castle” ရဲတိုက်
ရောမသားတို့ ရေစိမ်ရာ သဘာ၀ ရေပူစမ်းထွက်ရှိတဲ့ “Roman Bath”
စုံလင်တဲ့ Brand ပစ္စည်းများရောင်းချရာ “Bicester Village”
အောက်စဖို့ဒ် တက္တသိုလ် နဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း “Harry Porter Great Hall”
King’s Collage အနောက်ဖက်ရှိ ကမ်မြစ်အတွင်း ဘုတ်စီးမည့်အစီစဉ် [River Punting
ကမ်းဘရစ်ချ် တက္ကသိုလ် “Cambridge Collage”
ဝင်ဆာနန်းတော် “Windsor Castle”
သိမ်းမြစ်အတွင်း အပျော်စီးသဘောၤစီး အစီအစဉ် [Thames River
ထောင်စုဘီးလို့ခေါ်တဲ့ “London Eye”
လန်ဒန်မြို့ သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Tower Bridge”
ချားလ်စ်မင်းသားနဲ့ ဒိုင်ယာနာ လက်ထပ်ပွဲ ကျင်းပရာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း “Westminster Abbey”, “Westminster Bridge”
Big Ben နာရီစင် , နွေရာသီစံနန်းတော် – Buckingham Palace အစရှိတဲ့ နေရာစုံကို ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးသွားဧည့်သည်များ ခရီးသွားဖို့ သုံးလိုက်ရတဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှု ပြည့်မှီသော အရည်အသွေး ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သော အုပ်စုခေါင်ဆောင်များနဲ့ အတူအမြဲ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားရစေမဲ့ တိုးဒီမြန်မာကို ဆက်သွယ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို Viber, Facebook ,Chat Box တို့မှလည်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဖုန်း – 378503, 378127 , 250734, 371105 , 373270, 38121
Viber / HP : 09779999147 ( Ma Wai Kyaw ),09779999146 , 09-777 2500 50